Gabadh 9 Sano jir ah oo lagu kufsaday Beledweyne – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gabadh 9 Sano jir ah oo lagu kufsaday Beledweyne
Gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Axmed Ibraahim foodcadde ayaa warbaahinta u sheegay in Saacaddihii lasoo dhaafay falal kufsi ah ay ka dhaceen Xaafaddo ka mid ah Magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in dadka la kufsaday ay ku jirto Gabadh Sagaal Sano jir ah, islamarkaana ay socdaan howlgallo lagu baadigoobaayo Kooxdii falkaasi ka dambeysay.
Magaalada Beledweyne ayuu sheegay in ay kusoo bateen rag dhibaato u geysta Haweenka Habeenkii, islamarkaana hadda ay sameynayaan Ciidamo habeenkii Magaalada Roondo ka sameeya.
Waxaa uu walaac ka muujiyay falalka kufsiga ah ee ka dhaca Magaalada Beledweyne, waxaana uu sheegay cidii lagu qabto in tilaabo adag ay ka qaadi doonaan.
Falalka kufsiga ayaa kusoo batay Soomaaliya bilihii ugu dambeeyay, waxaana jiray in Magaalooyin ka mid ah Puntland iyo Somaliland ay ka dhaceen falal kufsi ah oo badan.
Somalia shares solidarity with Ethiopia after airliner crush